This article may require cleanup to meet Wikipedia's quality standards. Please if you can. The talk page may contain suggestions. (13 April 2017)
အက်တမ်သည် လေးလေလေ ဖြိုခွဲလိုက်သောအခါ စွမ်းအင်အထွက်မှာ များလေလေဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆို သော် ပို၍လေးလံသောအက်တမ်၏ နျူကလိယပ်ကို ခိုင်မြဲစွာ စုစည်းထားရန် စွမ်းအင်ပို၍လိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယူ-၂၃၅ အက်တမ်ကို ဖြိုခွဲလိုက်သောအခါ ထိုအက်တမ်၏ နျူကလိယပ် ကို စုစည်းထားသော စွမ်းအင်အားလုံးသည် ပြိုကွဲ၍ထွက်လာ သော အက်တမ်ငယ်နှစ်ခု၏ နျူကလိယပ်နှစ်ခုကို စုစည်းထား သည့် စွမ်းအင်စုစုပေါင်းထက် ပို၍များသည်။ ထိုပိုများသော စွမ်းအင်သည် နည်းနှစ်မျိုးဖြင့် အက်တမ်မှ လွတ်ထွက်သွား သည်။ ပထမနည်းမှာ တန်ခိုးကြီးသော အိပ်စရေးကဲ့သို့သော ရေဒီယေးရှင်း အဖြစ်ဖြင့် လွတ်ထွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယ နည်းမှာ အက်တမ်ကို နှစ်ခြမ်းပေါက်ကွဲစေသော စွမ်းအင်အဖြစ် ဖြင့် လွတ်ထွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကွဲထွက်သော အက်တမ်၏ အစိတ်အပိုင်းတို့တွင် အက်တမ်ငယ်များနှင့် နျူထရွန်များပါဝင် သည်။ ယူ-၂၃၅အက်တမ်ကို ဖြိုခွဲလိုက်သောအခါထိုအက်တမ်၏ နျူကလိယပ် ကို စုစည်းထားသော စွမ်းအင်အားလုံးသည် ပြိုကွဲ၍ထွက်လာသောအက်တမ်ငယ်နှစ်ခု၏ နျူကလိယပ်နှစ်ခုကို စုစည်းထား သည့် စွမ်းအင်စုစုပေါင်းထက် ပို၍များသည်။ ထိုပိုများသော စွမ်းအင်သည် နည်းနှစ်မျိုးဖြင့် အက်တမ်မှ လွတ်ထွက်သွား သည်။ ပထမနည်းမှာ တန်ခိုးကြီးသော အိပ်စရေးကဲ့သို့သော ရေဒီယေးရှင်း အဖြစ်ဖြင့် လွတ်ထွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယ နည်းမှာ အက်တမ်ကို နှစ်ခြမ်းပေါက်ကွဲစေသော စွမ်းအင်အဖြစ် ဖြင့် လွတ်ထွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကွဲထွက်သော အက်တမ်၏ အစိတ်အပိုင်းတို့တွင် အက်တမ်ငယ်များနှင့် နျူထရွန်များပါဝင် သည်။ ယူ-၂၃၅ အက်တမ်သည် ပေါက်ကွဲထွက်သည့်အချိန်၌ အပူချိန်စင်တီဂရိတ် ၂ဝဝ,ဝဝဝ,ဝဝဝ,ဝဝဝ,ဝဝဝ ဒီဂရီ ရှိသည်။